ပွဲကျန်ဆို အမြဲးမှန်တဲ့ ရိုက်တိုင်းရှုံးမောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပွဲကျန်ဆို အမြဲးမှန်တဲ့ ရိုက်တိုင်းရှုံးမောင်
ပွဲကျန်ဆို အမြဲးမှန်တဲ့ ရိုက်တိုင်းရှုံးမောင်
Posted by MgMobile on Dec 17, 2012 in Copy/Paste | 18 comments
မင်္ဂလာပါ ဘောလုံးဝါသနာရှင် ပညာရှင် အနိုင်ရနေသောလူနည်းစု နှင့်
အရှုံးရလဒ် ထဲကရုန်းမထွက်နိုင်ကြတဲ့ ပရိတ်သတ် အပေါင်းတို့ခင်ဗျားးးးး
17-12-2012 တနင်္လာညရဲ့ ပွဲးကျန်များမှ ကံစမ်းလို့ ခန့်မှန်းပေးရမယ်ဆိုရင်တော့
Celta devigo Vs Real Batis စတဲ့သုံးသင်းကို ခန့်မှန်းပေးချင်ပါတယ်။
ယခုပွဲစဉ်မှာ ဥရောပ ဘောလုံးလောင်းကစား ဒိုင်များ၏ ဈေးနှုန်းဖွင့်လှစ်မှုအရ
အာဆင်နယ် တစ်လုံးသွင်းရင် ဆယ်ပြားအနိုင် ဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။
ယခုပွဲစဉ်မှာတော့ အပီဗျင်းမယ့် ရီဒင်း ကိုအကြိုတ်တွေ့မိပြီး အာဆင်နယ် ကတော့
သရေ ရနိုင်ပြီး တစ်ဂိုးထက်ပို မရှုံးနိုင်တဲ့ ရီဒင်းကို အားပေးပါမယ်။
ရလဒ်။ ။ သရေကျဖို့ များပြီး အာကြီး တစ်ဂိုးအသာလောက်ဖြင့်
ယခုပွဲစဉ်မှာတော့ ဒီပို့တီဗို အနေဖြင့် သရေဆိုပါက ငါးဆယ် ရာခိုင်နှုန်း ဆုံးရှုံးမှာဖြစ်တယ်လို့
ဥရောပ လောင်းကစား ဒိုင်များမှ ဈေးနှုန်းဖွင့် လှစ်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဗယ်လာဒိုလစ် အနေဖြင့် အပီဆို့မယ့် ဒီပို့ ရဲ့ နောက်တန်းကြောင့် တစ်ဂိုးရဖို့တောင် မလွယ်ပါဘူး။
ဒီပို့အနေဖြင့်လဲ တိုက်စစ်ပိုင်း ဂိုးသွင်းမသေချာမှုကြောင့် ဂိုးရဖို့ ရုန်းကန်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၀-၀ , ၁-၁ လောက်ဖြင့် သရေကျဖို့များပြီး ဒီပို့စ် အနိုင်ရဖို့ ၁၀% လောက်သာရှိတာမို့
၁၀၀ ရင်းပြီး ၅၀ ယူမယ့် ဗယ်လာဒိုလစ်ဖက်မှ အမိုက်ခံ၍ အားပေးပါမယ်။
Celta devigo Vs Real Batis
ယခုပွဲစဉ်မှာတော့ ဆဲလ်တာဗီဂို သရေဆိုပါက ပြားကိုးဆယ် အရှုံးဟု ဈေးနှုန်းဖွင့်လှစ်ထားမှုကို
တွေ့ရပါတယ်။ ဆဲလ်တာဗီဂို ခြေစွမ်းပိုင်း ကောင်းမွန်တာမှန်ပေမယ့် ။ ရီးရဲလ် ဘက်တစ် အနေဖြင့်လဲ
အဝေးကွင်းရောက်ရင် ခြေစွမ်းပိုင်း ပိုမိုကောင်းတတ်တာမို့ သရေမျှော်လင့်ခွင့် ရှိနေတာကို သတိပြုရမှာပါ။
အနိုင်ရဖို့ ကြိုးစား ကစားလာမှာဖြစ်ပြီး အနိမ့်ဆုံး သရေ သေချာနေတဲ့ အတွက် ပြား ၉၀ ရင်းပြီး
၁၀၀ ရယူနိုင်ဖို့ ဆဲ့လ်တာဗီဂို ကိုအားပေးပါမယ်။
ကမ္ဘာတစ်လွှားမှ အနိုင်အရှုံး ဆရာတွေ အတွက်ကတော့
စတဲ့ ၅ ခုကို မိမိသင့်တော် သလို ရွေးချယ်အားပေးပါက အနိုင်ရလဒ်ထွက်ပေါ်နိုင်ဖို့
အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှု ပင်ဖြစ်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျားးးးးးးးးးးး
အားလုံး အဆင်ပြေ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း ပြုသလိုက်တဲ့……….
အာစင်နယ်…ရီးဒင်းပွဲက ဗြုန်းကနဲပေါက်ဈေးကို တွေ့တာနဲ့ ရီးဒင်းကို တန်းသဘောကျသွားတယ်…အဲ့ဒီလို ဖြစ်တိုင်း မှားတာပဲ…ဒီတခေါက်တော့ အာစင်နယ် ကောင်းမယ်ထင်တာပဲ…အာစင်ဝင်းဂါးအတွက် must win ပွဲ ထင်တာပဲ…
ဒီပို့ပွဲကတော့ အရင်ပွဲ ရလဒ် ကြည့်ရမယ်ထင်တယ်..အရင်ပွဲက ATL ကို ၆းဝ နဲ့ အရှက်တကွဲ ရှုံးထားတယ်…အဲ့လို ရှုံးပြီးနောက်ပွဲ အိမ်ကွင်းရောက်ရင် အရှက်ပြေဇွတ်ကန်တတ်တယ်…
မိုက်တယ်ပဲ ပြောချင်ပြော ဒီပို့ကို သဘောကျနေပြန်ရော…ဘက်တစ်ကတော့ နောက်ဆုံးပွဲ ကြည့်ထားတာ ခြေကို တော်တော် သဘောကျတယ်ဗျို့…ရွဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးဗျို့..တကယ့်ကို ပြောင်းပြန်တွေချည်း ကြိုက်နေတယ်…မနက်ဖြန်ကျမှပဲ အဖြေညှိရအောင်ဗျို့…အာစင်နယ်…ဒီပို့…ဘက်တစ်ပဲ…
အဘလဲ ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ်ရှုပ်နေတာနဲ့၊ ဘောပို့ စ်မတင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်
မောင်ရင် ဘောလုံးခန့် မှန်းပို့ စ်တွေ တင်တာ ကို တွေ့ ရပေမယ့် ၊ မပြည့်စုံတာတွေကို တွေ့ ရလို့၊ အဘ ခပ်တည်တည်နဲ့လိုတာလေးတွေ ပြောဦးမယ်
ပထမဆုံး အဓိက လိုအပ်ချက်ကတော့ ၊ ပွဲချိန် လုံးဝ မပါတာပဲကွဲ့ ၊ ပွဲချိန်မပါပဲ အသင်း၂သင်းပဲ ချရေးထားတော့ ၊ ဘောလုံးပွဲတစ်ကယ်လောင်းမယ့်လူက မောင်ရင့်ပို့ စ်ကို ဝင်ဖတ်ပြီးရင် ၊ ဘယ်အချိန်ကန်ကြမှာပါလိမ့်ဆိုပြီး ရှာရတာ တစ်မောကွဲ့ 
မောင်ရင့် ပို့ စ် တွေကို ကြည့်လိုက်ရင် ၊ ပွဲတစ်ပွဲ အသင်း၂သင်းကန်တယ် ဆိုပါတော့ ၊ မောင်ရင် ရေးတဲ့ပုံက တောင်သင်း နဲ့ မြောက်သင်း ကန်ကြမှာ……. ပိုက်ဆံလိုချင်ရင် တောင်သင်း လောင်း ….. အဲဒီလိုမျိုး ဖြစ်နေတယ်
တောင်သင်း ဟာ အဆင့် ဘယ်လောက် ပါ ၊ သူ ဘယ်နှစ်ပွဲကန်ပြီး ၊ ဘယ်နှစ်ဂိုး သွင်းနိုင်ခဲ့သလဲ ၊ ဘယ်နှစ်ဂိုး ပြန်သွင်းခံရလဲ
သူ ရှေ့ ပွဲတုန်းက ဘယ်လို ခြေစွမ်းရှိခဲ့လဲ
သူ့ အသင်းမှာ နည်းပြထွက်သွားလား အရင်နည်းပြပဲလား ၊ အဓိက ကစားသမားတွေ ဒဏ်ရာရနေသလား
ဒါမှမဟုတ် အဆင့်၁ ကို လုမယ့်ပွဲလား
အဲဒါ….. အဲဒါ တွေ အများကြီး လိုနေတယ်ကွဲ့ 
ဈေးကိုရေးပြပြီး ဘယ်အသင်းကို လောင်းပါလို့ပြောရုံနဲ့ တော့
အင်း…………… မောင်ရင်မိုပိုင်းပြောသလိုပါပဲ ၊ ဆာဗာ ဆာဗာ
ဒါနဲ့ပဲ ကိုပေက ဘာမှ မပေးတော့ဘူးလား။ စောင့်နေတာ မနေ့ကလည်း မဆော့ရဘူး။ အခုည တင်ပေး
johnnydeer ရေ လူတစ်ကိုယ် အကြိုတ်တစ်မျိုးဆိုလေတော့
မိမိနှစ်သက် သည်ကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိကြောင်းပါခင်ဗျ။
johnnydeer ပြောသလိုပါပဲ ပွဲပြီးမှသာ အဖြေညှိကြတာပေါ့ခင်ဗျ။
ယခုလို လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ထောက်ပြဝေဖန် ခဲ့လို့ အထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါခင်ဗျ။
ပွဲချိန်မထည့်တဲ့ အကြောင်းကို အရင်ရှင်းပါမယ်ခင့်ဗျ။ ဘောလုံးပွဲကို ငွေကြေးစိုက်ထုတ်
အားပေးမည့်သူတစ်ယောက်ဟာ ယခု ဒီ post ကိုဖတ်မည်ဆိုကတည်းက internet အသုံးပြု၍
ဖတ်ရသည်ဖြစ်ပါ၍ ပွဲချိန်ကို အလွယ်တစ်ကူ သိရှိနိုင်ပါသည်ခင်ဗျ။ အချက်အလက် မပြည့်စုံမှုကို
ပြောရရင်တော့ အရင် post များတွင်တော့ တစ်ခါတစ်ရံ အချက်အလက် အနည်းငယ်ထည့်သွင်း
ရေးသားခဲ့ဖူးပါတယ်ခင့်ဗျ။ ကိုပေ အနေဖြင့် အသင်းတစ်သင်းကို လောင်းဖို့ရွေးရာတွင် မည်သို့မည်ပုံ
ရွေးချယ်သည်ကိုတော့ ကျနော် မသိကြောင်းပါခင့်ဗျ။ ကျနော် အနေဖြင့် အသင်းတစ်သင်းကို
ရွေးချယ်ရာတွင် လက်ရှိရပ်တည်မှုအဆင့် ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲး အနိုင်အရှုံး line up စုံးမစုံ တွေ့ဆုံမှု
သမိုင်းကြောင်း စသည့်တို့ကို အဓိကမထားပါကြောင်း။ လောင်းကစားဒိုင်၏ ဈေးနှုန်းဖွင့်လှစ်မှု
ကိုသာ အဓီကထား၍ ရွေးချယ်ခြင်း ၊ ပရိတ်သတ်အများ လက်ရှောင်မည့်ပွဲ စဉ်များ ကိုဦးစားပေး၍
ရွေးချယ်ခြင်းများကိုသာ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပါသဖြင့်။ အချက်အလက်ကို မထည့်သွင်းခြင်း
ကိုပေပြောတဲ့ အချက်အလက်မျာ ထည့်သွင်းခြင်း နှိုင်းယှဉ် စဉ်းစားခြင်းအလုပ်မှာ
လောင်းတဲ့လူလုပ်ရမယ့် အလုပ်မဟုတ်ပါကြောင်း ဈေးနှုန်းဖွင့်လှစ်တဲ့ ဒိုင်ကသာ
မိမိတို့အနေဖြင့် စဉ်းစားရမည်မှာ ဒိုင်လုပ်သူ မည်သည့်ရလဒ်ကိုမှန်း သဖြင့် မည်သည့်
ဈေးနှုန်းကို ဖွင့်လှစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကသာလျှင် အဓိကကျသည့်ဟု လက်ခံပါကြောင်းးးးးးးးးးး
ဒီထက်မက နက်နဲသော အတွေ့အကြုံများရှိပါက သို့မဟုတ် ပြန်လှန်ဆွေးနွေး မှုများပြုလုပ်လိုပါက
mobilemobie@gmail.com သို့ဆက်သွယ် အကြံပြု နိုင်ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
ကိုပေ၏ ပရိတ်သတ်များအပေါ်ထားရှိသည့် စေတနာကို နားလည်အသိအမှတ်ပြုပါကြောင်း
ဘာမှထွေထူးမရှိလို့မေးလ် မလိုပါ
မောင်ရင်မိုပိုင်း ပြောတဲ့ အချိန်မလိုဘူး ဆိုတာကိုတော့ ပြောရလိမ့်မယ်
မောင်ရင့် ကွန်မင့်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ မောင်ရင် က ရမ်းတာပဲ
ပလန် အေ ၊ ပလန် ဘီ ၊ ပလန် စီ ဆိုတာ ဘယ်အလုပ် လုပ်လုပ် ထားရတယ်လေကွယ်
၆ နာရီ မှာ ကန်မယ့် တစ်ပွဲ ရှိတယ် ဆိုပါစို့ 
ပြီးရင် ကျန်ပွဲတွေက ၇ ခွဲ
၁၀ ခွဲ ဆိုကြပါစို့ 
ကိုယ်က ၃ပွဲ ရွေးမယ် ဆိုပါစို့၊ ကိုယ်ရွေးမယ့် ၃ပွဲက တစ်ချိန်ထဲကန်မှာဆိုပေမယ့် ၊ အဲဒီ ပွဲချိန်တွေဟာ ညနောက်ဆုံးပွဲတွေ ဆိုရင်တော့
ကိုယ်ရွေးမယ့် ၃ပွဲလုံး မှားခဲ့ရင် ဆိုတဲ့ အတွေးလေးတော့ စဉ်းကို စဉ်းစားထားရမှာ အမှန်ပါပဲ
၃ပွဲလုံး မှားခဲ့လို့၊ ဆက်လိုက်စရာ ပွဲက ဘယ်မှာလဲ
အဲဒီမှာ ပွဲချိန် ဆိုတာ လိုကို မလိုဘူး လို့မောင်ရင် လွယ်လွယ်ပြောတာ အံ့သြလွန်းပါတယ်
အဘမောင်ပေ ဆိုရင် ၊ ဘောလုံးပို့ စ်တစ်ခုတင်ရင် ၊ ကျန်တာဘာမှ မလိုတော့ဘူး ၊ ကိုယ့်ပို့ စ် ထဲက ပွဲချိန်တွေ ကြည့်ပြီး ဘယ်အချိန်က ပွဲကို အရင်လုပ်မယ် ၊ နိုင်ရင် နောက် တစ်ပွဲကို အပြည့်ဆက်ရင်ဆက်မယ် ၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်ဝက်ပဲ ဆက်ရင် ဆက်မယ်
တစ်ကယ်လို့ ပထမပွဲမှာ ကိုယ်ရှုံးခဲ့တယ် ဆိုရင်လဲ နောက်ပွဲစဉ်တွေထဲ ဘယ်ပွဲနဲ့ ပြန်ယူမယ် ပြန်အဖတ်ဆယ်မလဲ
ဘောလုံးပွဲ နဲ့ ပိုက်ဆံလိုချင်တယ် ဆိုရင် ၊ ကိုယ့်အိတ်ထဲကလဲ ပိုက်ဆံကုန်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့အတွေးကြီး ကိုတော့ စဉ်းစားပြီးမှ လုပ်ပါ မောင်ရင် မိုပိုင်းရယ်
comment တစ်ခုတစ်ခု ဖြင့်ဆွေးနွေးရတာ သူကြီးကိုလဲ အားနာမိပါကြောင်း
ပွဲချိန်ကို လိုကိုမလိုဟု မပြောခဲ့ပါကြောင်း။ internet အသုံးပြုနေသူ တစ်ယောက်
အနေဖြင့် ပွဲချိန်ကို အလွယ်တကူသိရှိနိုင်ကြောင်းပဲပြောခဲ့ပါသည်။ ကိုပေ ပြောတဲ့
သုံးပွဲ စလုံးရှုံးခဲ့ရင်ဆိုတာ မှန်ပါကြောင်း ဒါပေသိ လောင်းကစား မပြုလုပ်ခင် သတိတစ်ခု
ထားဖို့က မိမိ လောင်းသမျှ အရှုံးဟု သတ်မှတ်ထားရမည်ဖြစ်ပြီး။ ရှုံးသွားခဲ့ပါကလည်း
မိမိ အတွက်ထိခိုက်မသွားနိုင်တဲ့ ငွေပမာဏဖြစ်ဖို့ အင်မတန် အရေးကြီးပါကြောင်း။
ပြန်ယူခြင်း ပြန်အဖတ်ဆယ်ခြင်း နှင့် ပတ်သတ်လို့ကတော့ ဘောလုံးပွဲဆိုတာ ဒီတစ်ည
နှင့် ပြီးဆုံးသွားမှာ မဟုတ်ကြောင်းးးးးးးး ယခင် မြန်မာဒိုင်များ ဈေးနှုန်းမဖွင့်ခဲ့သည့်
လိဂ်များပင် ယခုဖွင့်လာပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် နောက်နောက်တွင်လဲ ဒီထက်မက
ပိုပေါများလာဖွယ်သာ ရှိတဲ့အတွက် အေးအေးဆေးဆေး ဆော့ကစားကြရန်နှင့်
ဘောလုံးလောင်းကစား ဆိုသည်မှာ အကောက် 3% သာယူပြီး မိမိလောင်းသည့်
ပမာဏအတိုင်း ပြန်လျော်တာဖြစ်သည့်အတွက်၎င်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်သည့်
အသင်းကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိသည်ကတစ်ကြောင်း ထိုးသားမှာ အလွန်သာသည်ဟု
ထင်နိုင်စရာရှိပေမယ့်။ ပိုင်သည်သေချာသည် ဆိုသည့်ပွဲမှာ မည်သူမဆို
စကားအရ စာအရသာ ဆိုရခြင်းဖြစ်ပေကြောင်း ထိုအတွက် အမှန်တစ်ကယ်
အရှုံးအနိုင် ဆိုသည်မှာ ပွဲးပြီးဆုံးမှသာ သေချားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် မိမိ မနိုင်သော
ငွေပမာဏဖြင့် ရင်ခုန်ခြင်းကို အထူးသတိပြုသင့်ပါကြောင်းးးးးးးးး
ပုံက… အဒု့ …ပုံရေးရဲဂျ ။
သားသားလောက် နီးနီးချောနေလို့ မေးဒါဘာ..
ကိုအလင်းဆက်ရေ ပုံလေးကတော့ ဂဗာကျော် လျှမ်းလျှမ်းတောက် ပျိုတိုင်းရဲဂျားမှာ
ရေပန်းစာ ဟေားလိဝု၀် မှာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်တဲ့
အဆိုတော် မင်းသား တေးရေးဆရာ ဒါရိုက်တာ နှင့် မူပိုင်ထုပ်လုပ်သူ တစ်ယောက်ရဲ့
ပုံအသုံး၍ ပြက္ခဒိန် တွင်ထည့်သွင်းခြင်း၊ ကြော်ငြာများတွင် ထည့်သွင်းခြင်း ပြုလုပ်လိုပါက
အထက်မှ Email လိပ်စာအတိုင်း ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး
တစ်ကယ် စားတဲ့ သူငယ်ပေါ့လေ
ဟား ဟား ဟား ဟားးးးးးးး
ဟားးးး ဟားဟား ဟားးးးးးးး (ဗိုလ်အောင်ဒင်လေသံဖြင့်ဖတ်ရန်)
မကြောက်ပါနဲ့ မောင် ကြက်သရေဂီး နဲ့ မောင်ပေ ဗိုလ်အောင်ဒင်
———— တာရေချိုးမလို့ဗာ …..
ဟားးးး ဟားဟား ဟားးးးးးးး
နယ်စပ်မှာ ဆိုတာက အလှပဂေး အလန်းဇယားဆော်လေးတွေ ပေါးမှပေါး
ခီညားဒို့တော့ဂျာ ယိကျားချင်းဗဲ ကျုပ်ကလက်ရှောင် မှာပါ။။။။။။
အာဂျီး ခြေက မသေချာ …
ရီဒင်း ကို ယုံပြီး ပုံရအောင်ကလည်း မစွံ …
၃ ပါရင် အားဂျီးကို အောသင့်တယ် ….
၁ ပါရင် ရီဒင်းဘက်က ရပ်သင့်တယ် .. ဒါဗျဲ .. ငှဲ .. ငှဲ …
မဟာရာဇာဂျီးရေ စာရွက်လှန် မှာဆိုရင် မလှန်တော့နဲ့ဗျ။
ကျုပ်ကလဲ စာရွက်လှန်ပြီး ရွေးထားတာ နှစ်ယောက်လှန်ဆိုရင်
ဘာပြောပြော အန်ကယ်မိုဘိုင်းရယ် ဒီဟာကလောင်းကစားမှုဗျ ဗဟုသုတလဲမရ အကျိုးလဲမရှိ ဆာဗာလေးတာပဲအဖတ်တင်မယ် သူကြီးကိုသနားကြပါဦး အော်စာလုံးပေါင်လေးတွေလဲပြန်စစ်ဦးနော်
ဗဟုသုတ ရဖို့အတွက် ဆိုရင်တော့ စာအုပ်စာပေ လေ့လာခြင်းနှင့် ဒီထက်ပိုပြီး
လက်တွေ့ကျကျ အတွေ့အကြုံ ဗဟုသုတ ပိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဖြင့် ခရီးထွက်ခြင်း အမှု
ပြုရပေလိမ့်မည်ခင်ည။ အကျိုးရှိဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ လောင်းကစားလုပ်ခြင်းကို
ရှောင်ရှားခြင်းကသာ သင့်အတွက် ပိုမိုအကျိုးရှိစေနိုင်တာကို လူတိုင်းနားလည်ပြီးသား
ဖြစ်ပေလိမ့်မည်ဟု ယူဆပါသည်ခင်ည။ ယခုကျနော် ခန့်မှန်း တင်ပြရခြင်းအမှုမှာလဲ
အပျင်းပြေ ဆော့ကစားသော ၀ါသနာ ရှင်များအတွက်သာ ရည်ရွယ်ကြောင်းပါခင့်ဗျ။
ဆာဗာ လေးခြင်းနှင့် ပတ်သတ်လို့ကတော့ နွားစီးတဲ့ သားအဖ ကိုသွား၍ မြင်မိကြောင်း
နွားလေးမှာ စိုးတဲ့အတွက် ခြေလျင် ဆင်းလျှောက်ခြင်းအမှုကို လေးတယ်လို့ထင်တဲ့
ကိုဖောင်ထိုးက သာပြုလုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်ခင့်ည။
ယခုလို ဝေဖန်အကြံပြုတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျ။
ဟဲ..ဟဲ..ကိုမိုဘိုင်း…ကျွန်တော် နှစ်ကျပ်နိုင် ငါးမူးရှုံး …တကျပ်ခွဲ ပေါင်းတယ်နော်…
မနေ့ညက အကောင်းဆုံး တွေးခေါ်စဉ်းစာ နိုင်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူပါ၏။
၄ စားပါတယ်ဗျာ နောက်များမှာလဲ အပြုသဘောဆောင်တဲ့
ဆွေးနွေးမှုလေးတွေ ဖလှယ်ကြတာပေါ့ဗျာ။ တစ်လှေထဲ မှောက်တွေပဲ…..